Ny tontolon’ny bilaogin’ny vehivavy Afrikanina amin’ity herinandro ity (2006) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Oktobra 2018 15:38 GMT
Ny tsy fitoviana sy ny fitsinjarana tsy mitovy atao amin'ireo harena misy eo anivon'ny Kenyana no tena manahirana an'ny Girl Next Door, izay manoratra momba ny firenena izay ahitana ‘mosary, harena sy fahantrana indray miaraka’ ary raha manana ny sakafo ilainy ny ampahany ao amin'ny firenena, ny hafa kosa matin'ny hanoanana. Miresaka momba ny olana ami'ireo manampahefana Kenyana ity bilaogera ity ary ary milaza hoe “tsy misy dikany ny mitsabo ny soritr'aretina raha tsy mijery ny fototry ny antony”.
Anisan'ireo olana hafa, manoratra momba ny fiantraikan'ny mosary eo amin'ny mponina sasany i Mimmz ary manontany tena raha midika izany hoe ‘“mbola manohy ny fandraharahany tsy tapaka i Nairobi‘.
Nyakehu kosa mandinika ny zava-misy fa ‘ misy ireo mividy sy mivarotra sakafo any amin'ny fanjakana Afrikana Tatsimo mandritra ny mosary sy ny hain-tany ankehitriny.
Tsy mahagaga an'ny Black Looks ny fandraràna ny fanambadian'ireo pelaka ao Nizeria satria efa tsy ara-dalàna ao amin'ny firenena ny fahapelahana. Ny mampiahiahy sy tsy mampandry saina kokoa” hoy izy nanoratra dia mandràra ny endrika fihetsiketsehana rehetra manosika ho an'ny zo na fankatoavana ny pelaka ity lalàna ity’ ary ny olana aterak'izany hatrehin'ireo mpanentan'ny zon'olombelona ho an'ny pelaka .
0.!.M64o;n,65ln6.ab,br.a W.,no,.o,d..n,;,mitondra ireo mpamakiny any amin'ny fitsidihana mahaliana sy manintona ao amin'ny Farany Andrefan'i Londra, manomboka ao amin'ny Mozea Britanika (British Museum) ary mifarana ao amin'ny Kianjan'i Leicester izay ahitana fampiratiana sy sinema.
Ny fanapahan-kevitry ny taona vaovao dia ny hanokatra zava-baovao iainana, nanapa-kevitra hamonjy fandaharam-pampisainana (reflexology) izay nivadika ho zava-niainana nahazoana aim-baovao araka izay nantenainy i Pilli. ‘Te-hanolotra ity fampiasana ity ho an'ireo olona rehetra mba hiala amin'ny fiainana mangirifiry ity aho‘, hoy izy nanoratra ary nilaza fa handeha ‘hitsangantsangana eny amoron-dranomasina’ izy amin'ny manaraka rehefa te-hiaina dia an-tongotra am-pahafinaretana.
Inona no tanjon'ny olona manandratra finoana sy foto-kevitra tsy arahiny na iombonany akory, hoy i Afrikan Eye mandinika, ary manome ohatra momba ny olona milaza fa tia an'i Afrika kanefa mbola mandany ny volany mividy entana afarana avy any ivelany fa tsy mividy ireo izay ‘tsara tarehy sy vita tsara’ natao taty Afrika.
‘Tsy mba hita mihitsy amin'ny t-shirt-n'ny olona na mihantona eo amin'ny sofin'izy ireo ny toerana manankarena manerana izao tontolo izao’, hoy i Helenism nanoratra ary nandefa ny sarin'ireo zatovovavy anankiroa izay nihaona taminy nandritra ny dia fientsenana nanao kavina lehibe, tsara tarehy amin'ny endrika sarintanin'i Afrika. ‘Arakaraka ny iadiana toerana iray na inona na inona antony ara-politika, no mahatonga azy ho marika iray“, hoy izy.
Pilgrimage to self mankalaza ny faha-36 taonany, mandinika ny fiainany ary mamintina fa na dia miteny aza ny olona fa nahavita dingana maromaro izy dia mbola maniry hanao zavatra hitondra fiovana izy. Mbola tsy voavaly ao an-tsainy, ny fanontaniana inona.
Manomboka ho tsara ho an'i Nneka ny zava-drehetra raha vao haingana izy no niala tamin'ny fifohana sigara ary manoratra momba ireo soritra mahaketraka rehefa mijanona tsy mifoka sigara, anisan'izany ny tsy fahitàna torimaso, ny fahasosorana, ny loha tsy mahasaina ary harerahana amin'ny ankapobeny. Mahereza, Nneka.